एमालेबाट को कहाँ लड्दै? (प्रत्यक्ष र समानुपातिक सूचीसहित) | Nagarik News - Nepal Republic Media
एमालेबाट को कहाँ लड्दै? (प्रत्यक्ष र समानुपातिक सूचीसहित)
काठमाडौ–बाम गठबन्धनको अगुवाइ गरेको नेकपा एमालेले आफ्ना उम्मेदवारहरुको आधिकारिक सूची सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार झापा ५ बाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काठमाडौ २ बाट माधवकुमार नेपाल र इलाम १ बाट झलनाथ खनालले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन्।
एमाले उम्मेदवारको पूर्ण सूची हेर्नुहोस् :
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७४ १९:३५ बिहीबार
एमालेबाट को कहाँ लड्दै समानुपातिक सूचीसहित